विबाह गरेर पतिको घर पुगे लगत्तै यि सुन्दरी बेहुलीले संसार छाडिन्, मायालु भन्दै पति रोए, माइतीमा रुवाबासी, कसरी भयो यस्तो ? « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
विबाह गरेर पतिको घर पुगे लगत्तै यि सुन्दरी बेहुलीले संसार छाडिन्, मायालु भन्दै पति रोए, माइतीमा रुवाबासी, कसरी भयो यस्तो ?
कुनचाहिँ दम्पतीले आफ्नो सुख, सम्पत्ति र वैवाहिक जीवनको समृद्धि एवं सुदृढताको कामना गर्दैनन् ? आफ्नो मनोकामनाको सफलताका लागि सबै चिन्तित पनि हुन्छन्। जब श्रीमान्-श्रीमतीले आफ्नो व्यावहारिक विचारधारालाई एक-आपसमा आदान-प्रदान गरेर सफलता प्राप्त गर्छन्। एक-अर्कामा सद्भाव र सद्व्यवहार गर्न सिक्नुपर्छ। जसले गर्दा दाम्पत्य जीवन सफल हुनुका साथै सुख-शान्ति पनि मिल्छ।
उमेर जसरी बढ्दै जान्छ, जिम्मेवारीको बोझ पनि त्यसरी नै बढ्दै जान्छ। एक-अर्कामा विश्वास गर्ने दम्पतीले जस्तोसुकै बोझ पनि सहजै सामना गर्न सक्छन् जसले गर्दा उनीहरूले कहिल्यै एक्लोपन महसुस गर्न पाउँदैनन्। कुनै पनि कामकारबाही गर्दा तेरो-मेरो नभनी आपसी समझदारीमा गर्नु राम्रो हुन्छ। जसले गर्दा श्रीमान्-श्रीमतीबीचको सम्बन्ध प्रगाढ बन्नसक्छ। सानोतिनो मतभेदलाई सामान्य सम्झनुपर्छ, कहिल्यै घमन्ड गर्नुहुँदैन। यसका साथै श्रीमान्-श्रीमतीबीचको कुरा तेस्रो व्यक्तिलाई सुनाउन र सुन्न दिनुहुँदैन, त्यसले घरमा सधैं झ’ग’डा पर्नसक्छ। एक-अर्कामा धा’क-र’वाफ देखाउनुहुँदैन। एक-अर्कालाई मन नपर्ने कुरा बारम्बार गर्नुहुँदैन। नयाँ काम गर्नु छ भने जहिले पनि सोचेर आपसमा सरसल्लाह गरी गर्नुपर्छ। यदि दुईमध्ये कसैलाई रि’स उ’ठ्यो वा आ’वेगमा छ भने अर्कोले यथासम्भव मौन रहनुपर्छ।
रिस विस्तारै कम हुँदै गएपछि शान्त वातावरणमा धैर्यका साथ समझदारीपूर्वक कुरा गर्नुपर्छ। दाम्पत्य जीवनमा स्थायित्व वा सुख-समृद्धिका लागि आफ्नो व्यक्तिगत सम्बन्धको पनि ख्याल गर्नुपर्छ अन्यथा, व्यर्थमा अशान्ति, क्रो’ध एवं वि’द्रो’ह उत्पन्न हुन्छ। शरीरमा त’ना’व भए धेरै रि’स उ’ठ्ने, न’चाहिँदो आ’रोप लगाउन मन लाग्ने, अरूको कुरा गर्न मन लाग्छ। यसका साथै गलत कुरा सोच्न पनि मन लाग्ने हुन्छ। यी सबै म’स्ति’ष्कमा त’ना’व उत्पन्न भएपछि हुन्छ। एक-अर्कामा हार्नु, पराजय स्वीकार गर्नु नै दाम्पत्य जीवनमा सफलता पाउनु हो। जसले गर्दा वैवाहिक जीवनमा सधैं शान्त र सुखमय रहन्छ। आज प्रायः श्रीमान्-श्रीमती दुवै जागिरे र व्यस्त छन्। जसले गर्दा उनीहरू कमै मात्रामा सँगै समय बिताउन पाउँछन्। एक-अर्कामा विश्वास छ भने उनीहरूले फुर्सदको समय रमाइलोमै बिताउँछन्।
यसै क्रममा एक २६ वर्षकी महिलालाई उनकै श्रीमानले चल्दै गरेको रेलबाट ध’के’लि दि’एका छन् । ती महिला गु’डिरहेको रे’लको ढो’कामा नै उ’भिएकी थिईन् । मुम्बई पुलिसका अनुसार यो घटना सोमबार दिउँसोको हो । आफ्नै श्रीमतीलाई गु’डि र’हेको रेलबाट ध’केली दिने ती पुरुषले भारतको चेम्बुर र गोवंडी रेलवे स्टेशनको बीचमा आफ्नै श्रीमतीलाई ध’के’लि दिएका थिए । गु’डि’रहेको रे’लबाट श्री’माने ध’केली दि’एपछि ती महिलाको निकै नै भ’या’न’क मृ’त्यु भएको रे’लमा सवार यात्रुहरुले प्रहरीलाई बताएका थिए ।
यात्रुहरुको बयानकै आधारमा ती श्रीमानलाई प्रहरीले गि’रफ्तार गरिसकेको छ । भारतीय प्रहरीको भनाई अनुसार ती श्रीमतीलाई ध’के’ल्ने श्रीमान वर्षले २१ का हुन् । उनी र उनको श्रीमती दुवै नै मज्दुर काम गरेर आफ्नो गुजारा चलाई रहेका थिए । आजभन्दा दुई महिना पहिले यी दुवैले विबाह गरेका थिए । सोमबारको दिन यी दुवैले मुम्बईको लोकल रे’ल’बाट यात्रा गरिरहेका थिए । यिनीहरुको ७ वर्षकी छोरी पनि छ । जुन छोरी ती मृत्यु भएकी महिलाको पहिलो श्रीमानबाट जन्मिएको हो ।
अहिले त्यो श्रीमानलाई भारतीय प्रहरीले गिर”फ्तार गरि सकेको र गि’रफ्ता’र पछि त्यो व्यक्तिलाई घटना स्थलमा लगिएको प्रहरीले जनाएको छ । घटना स्थलमा प्रहरी पुग्दा ती महिला बे’होस अ’वस्थामा र निकै नै चो’ट’प’ट’क ला’गेको अवस्थामा भटिईन् । महिलालाई त्यस्तो अवस्थामा भेटेपछि प्रहरीले नै नजिकैको अस्पतालमा पर्याएको थियो । तर अस्पताल पुग्नासाथ डाक्टरले ती महिलालाई मृतक घोषित गरिदिएका थिए ।
हिन्दू समाजमा प्राय पुरुष महिलामाथि आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न चाहन्छन्। श्रीमतीले जागिरका अतिरिक्त घरको सम्पूर्ण कामको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। यसले गर्दा पनि विश्वासको भावना कुण्ठित हुन्छ। श्रीमान्-श्रीमतीबीच रोमान्स, खुलापन, आनन्द र मीठा-मीठा कुरा गर्न मन लाग्दैन। यसमा श्रीमान्-श्रीमती दुवैको कमजोरीको फाइदा तेस्रो व्यक्तिले लिन सक्छ। श्रीमान्को अगाडि बोल्न नसक्नु, श्रीमान्को पद वा जागिरको घमन्ड गर्नु, श्रीमान्लाई मनले जित्न नसक्नु आदि पनि श्रीमती सधैं पिछडिने कारण हुन्।
दाम्पत्य जीवनमा पैसालाई मात्र महत्त्व दिनुहुँदैन। आखिर पैसा सर्वोपरि पनि होइन। श्रीमान्-श्रीमतीबीचको विश्वास र रोमान्स नै उनीहरूको पूजा हो, आनन्द हो, शान्ति हो। श्रीमतीले पनि आफ्ना श्रीमान्को भावना विपरीत काम गर्नुहुँदैन। बजार जाँदा सपिङलाई मात्र महत्त्व दिनुहुँदैन। रेस्टुराँ जाँदा जहिले पनि श्रीमान्लाई मात्र बिल भुक्तानी गर्न लगाउनुहुँदैन। मोबाइलबाट फोन गर्नुपर्दा रिङ बज्नासाथ अलि टाढा गएर फोन गर्ने, फोनमा मात्र ध्यान दिने, श्रीमान्ले कतै घुम्न जान प्रस्ताव राखे स्वीकार नगर्ने, अन्य पुरुषको मात्र कुरा गर्ने, रोमान्स एवं मनोरञ्जनको चाहना नगर्ने, बजार आदि ठाउँमा घुम्न जाँदा कहिले अरू साथीले बोलाए श्रीमान्लाई तपाईं घर जाँदै गर्नुस् म पछि आउँछु आदि भन्ने कारणबाट पनि श्रीमान्-श्रीमतीबीच वैमनस्यता उत्पन्न हुन्छ।
श्रीमान्सँग घुम्न जाँदा पहिरनको पनि ख्याल राख्नुपर्छ र साथमा मोबाइल भए अनावश्यक कल आए लामो कुरा नगर्नु नै राम्रो हुन्छ। यी कुरा श्रीमतीमा मात्र लागू नभई श्रीमान्मा पनि लागू हुन्छ। श्रीमतीलाई मन नपर्ने कुरा गर्नु पनि हुँदैन।
पत्नी राधिकासहित ओली पुगे पशुपति मन्दिर
काठमाडौं १२ माघ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज पुशपतिनाथ मन्दिरमा पुजाआजा गरेका छन् ।
प्रचण्डले शिलान्यास गरेको पुलको उद्घाटन कार्यक्रमलाई ओली समूहले शक्ति प्रदर्शनको माध्यम बनाउँदै
काठमाडौं १२ माघ । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शिलान्यास गरेको पुलको उदघाटन भने प्रधानमन्त्री
हेर्नुहोस् यस्तो छ सजिलै घरमा पानी पुरी बनाउने तरिका (भिडियो)
पानी पूरी भन्ने वित्तिकै धेरै जसोको मुखै रसाउँछ । यो भारतमा मात्र होइन पछिल्लो समय
बेहुलाको भेषमा यस्ता देखिए अभिनेता बरुण धवन,सात फेरा लागेको तस्विर बाहिरिए
एजेन्सी । बलिउड नायक वरुण धवनले आइतवार विवाह गरेका छन् । उनले प्रेमिका रहेकी फेसन